Indlu yezindwendwe "I-Golden Mile", i-Anapa: ukubuyekezwa kwezivakashi
I-Black Sea resort, lapho ungathola khona amahhotela angabizi, izikhungo zokuzilibazisa, izindlu zokugibela kanye nezindlu zezivakashi - i-Anapa. "I-Golden Mile", okuzoxoxwa ngakho kulesi sihloko, ukuhlobisa kwalo muzi. Ngakho-ke, okungenani, izivakashi ezaba nethuba lokuchitha iholide zazo zikhuluma. Isihloko sethu sisekelwe ekubuyekezweni kwabahambi. I-Anapa idume ngezikhungo zezempilo. Emanzini asezindaweni zasendaweni ngosizo lwamanzi amaminerali asekhaya futhi udaka ngempumelelo ukwelapha inani elikhulu lezifo. Kuphela lapha izimo zezindlu ezindaweni zokungcebeleka zezempilo zivame ukushiya kakhulu. Ngakho-ke, ezinye izivakashi zimi ezindlini zezivakashi, njenge "Golden Mile", futhi zithenga izifundo - uhlelo lokwelapha endaweni yokuhlanza. Ngakho-ke ihhotela elincane elinamachibi okubhukuda alifanelekile kuphela kulabo abaza ukunambitha injabulo yebala, kodwa nabakhenkethi abaza ukuthuthukisa impilo.
Uphi i "Golden Mile"
Le ndlu yezihambi isendaweni yokuqala yokuhlala edolobheni elinjenge-Anapa. "Golden Mile", Kirov, indlu 21 - leli yikheli lehhotela elincane elizimele. Ukubuyekezwa kuthi lesi sifunda saziwa ku-Anapa ngaphansi kwegama elithi "Mayak". Yebo, lesi simboli somuzi sisondela kakhulu eduze ne-Golden Mile. Futhi eduze kwalo kukhona igumbi lepompo lamanzi amaminerali, isikhungo sokuxilonga nesipilisi "Di-Luch" ne-sanatoria - "Rus" nelithi "Hope". Kuyinto elula kakhulu kulabo abafika e-Anapa ukuthuthukisa impilo yabo. Esikhathini se-SPA-salon "Maria" ungathola insizakalo yezinsizakalo ze-cosmetology. I-Kirov Street ithule, iyisithunzi. Kodwa eduze kukhona izitolo eziningi zokudla (ezinye zazo zisebenza ngehora), amathilomu, izindawo zokudla, imakethe encane. Ibhishi eliseduze, njengoba ukushiwo okushiwo, cishe imizuzu emihlanu. Futhi eduze nehhotela elincane yi-Victory Thirty Victory Park enezikhangayo. Akude kakhulu ukuhamba okuhle. Endaweni eseduze lapho kukhona khona amanzi epaki "Golden Beach".
I-Golden Mile (Anapa) yakhiwe ngamakhulu amabili nesishiyagalolunye. Lena isakhiwo samanje esiteshini ezintathu. Ingeniso esemqoka, mhlawumbe, izodumaza izivakashi, ejwayele iziqhumane ezikhangayo zamahhotela aseTurkey noma aseGibhithe. Indlu yezitini ejwayelekile, ema-balcony angaphezulu, amasango amakhulu angenalutho okungena nokuhamba. Kodwa-ke, uma ungena egcekeni elingaphakathi, uzungezwe umoya ojabulisayo weholide. Izitebhisi eziphefumulelwe ziholela ezingeni eliphezulu. Ngamunye wabo unendawo yakhe yokuphumula netafula kanye nezihlalo. Futhi engadini kukhona igumbi elincane lokubhukuda. Lizungezwe i-solarium enezibhebhe zelanga kanye nomcibisholo. Ensimini kukhona igumbi lokudlela. I-mini-hotela inokupaka kwayo, itholakala izivakashi ezifika ngemoto. Njengoba izivakashi ziqinisekisa, insimu yonke inhle kakhulu, ihlungwa kahle. Kunezitolo, ama-flowerbeds. Insimu i-video yokubhekwa.
I-mini-hotela "i-Golden Mile" (i-Anapa) ibeka izivakashi zayo emakamelweni avulekile anebhokisi kanye nendawo yokugezela, ehlotshiswe ngesitayela samanje esincane se-minimalism ekhululekile. Amaningi amakamelo angaphansi kwesigaba esithi "Double Junior". Kodwa ekamelweni lokulala kukhona isihlalo sokubamba, esingasetshenziselwa ingane. Ngisho nakuleli gumbi elilula kunesimiso sokuhlukaniswa, okuyinto, ekuqinisekiseni kwezivakashi, ikwazi ukubhekana kalula nokushisa okungamashumi amathathu nesithupha, isiqandisini, ithelevishini ngekristall screen. Indlu yokugezela enezigebhe ifakwe isambatho sezinwele. Esikhathini sethu kunzima ukwenza ngaphandle kwe-inthanethi. Futhi i-wy-fi ikhona emakamelweni, futhi iyashesha futhi ikhululekile. Ukuhlala kwemindeni emikhulu ehhotela kunezindlu zokulala ezintathu namabhedi amane. Unokuqukethwe okufanayo, kodwa indawo enkulu. Ama-suites afanele ukunakwa okukhethekile. Ziqukethe ikamelo lokulala. Zombili amakamelo ane-air conditioning ne-TV LCD. Njengendlela yokonga yokuhlala yokuvakasha "i-Golden Mile" batusa amakamelo ku-attic. Kuyinto ethokomele kakhulu lapho. Konke ukugxilwa okufanayo kwamakamelo, kuphela ukugeza kufakwe indawo yokugezela futhi i-TV ilula. Esigodlweni sezindiza kukhona elinye igumbi lokulala elilodwa nekhishi, elinamakamelo amabili.
La makamelo - ukuziqhenya kwendlu yezihambi "i-Golden Mile" (i-Anapa). Amafulethi atholakala esiteji sokuqala sakhiwo futhi abe nokungena komunye umuntu (hhayi eceleni komgwaqo). Ngaphezu kwalokho, banokufinyelela ngqo echibini. Lezi zindlu ziyizinga ezimbili. Esitezi esingaphansi kukhona ikamelo elilodwa, esiteji esingaphezulu kukhona ezinye ezimbili. Bonke bahlome uhlelo lokuhlukanisa, i-LCD TV, izigqoko zokugqoka, amatafula ombhede. Amakamelo aphezulu angama-balconi. Emagcekeni kunezindlu zokugezela. Banezigebhe kanye nebhuku, kanye nomshini wokuwasha. Ezingeni eliphansi kukhona igumbi lokuphumula kanye nekhishi elinendawo yokudlela. Kulesi sikhathi sokugcina kukhona konke okudingekayo ekuphekeni-isitofu esinesitini, i-oven microwave, i-kettle kagesi. Kukhona ngisho nomshini wokulahla. Ekamelweni lokuhlala lezindlu zokuhlala zokuhlala ezivela kubantu abayisithupha kuya kweziyisishiyagalombili, kukhona ifenisha yefenisha ephakanyisiwe, itafula lekhofi, isethi se-TV.
Ichibi lokubhukuda kanye nolwandle
Ihhotela "i-Golden Mile" (i-Anapa) linikeza izivakashi zalo ngokusetshenziswa kwamahhala kwamanzi amancane ahlanzekile. Ubukhulu bechibi ngamamitha amane. Abavakatjhi abavakatjhele i-mini-hotel ekuthomeni nasekupheleni kwenkathi (ngoMeyi noSeptemba) baqinisekisa bona amanzi atjhejiwe ukushisa okuhle. Ibhuku lokubhukuda lizungezwe indawo yokuthunga. Kukhona i-canopy kulabo abathanda ukuphumula emthunzini. I-Kirov Street e-Anapa itholakala esiqhingini. Ngakho-ke, izivakashi ze-Golden Mile zinokukhethwa kwamabhishi. Ngokuseduze kakhulu, ngamamitha angamakhulu amathathu, kukhona ugu lolwandle oluthi "i-Small Bay". Okokuqala, kunezintaba ezisezingeni eliphezulu ezitebhisini, kodwa uma uqhubeka nokuhamba phambili, ungaya olwandle ngendlela elula. Ibhishi ihlome kahle, kunezintaba ze-sun, i-solarium ku-pier. Kodwa izivakashi zincoma ukuthi zingabi nobuvila futhi ziqhubekele phambili, esiteshini "Rus". Lolu lolwandle lubuye lubonakale, njengalokhu "i-Little Bay", kodwa kukhona amasevisi ahlanzekile nangaphezulu. E-Anapa akukho ukusweleka emadolobheni asehlabathini. Kodwa izibuyekezo zixwayisa: phakathi nolwandle, amanzi aphenduka.
Ukuphatha kwehhotela elincane "i-Golden Mile" (i-Anapa) akusho ukuthi izivakashi zikhokhe. Kodwa futhi inikeza ukudla okuhleliwe. Engxenyeni yehhotela elincane kukhona igumbi lokudlela lapho umpheki onamakhono asebenza khona. Eduze lapho kukhona izindawo eziningi zokudlela. Esikhathini sangasemuva akuyona inkinga ukuthola indawo yokudlela noma i-cafe. Kodwa-ke, izivakashi eziningi zikhetha ukudla ehhotela. Amanani awekho aphezulu. Labo abaphumula ehlobo ka-2016, bathi ukudla kwasekuseni kudinga ama-ruble angu-200 umuntu ngamunye, isidlo sasemini - 280, nokudla - ngamakhulu amabili namashumi amabili. Ngaphandle kwalokho, kwakuyikhwalithi yokudla eyabangela ukuzulazula endlini endlini yezivakashi. Izitsha zinambitha kakhulu, ziphekwe ekhaya. Yiqiniso, lokhu akuyona i-buffet. Izitsha zisakazwa ngokwemenyu jikelele.
Lokho abakushoyo ngokudla okunempilo e-Golden Mile Hotel (Anapa)
Izivakashi eziningi, emva kokubhuka kuphela indawo yokuhlala noma indawo yokulala ngekusasa, zashintsha isinqumo sabo lapho. Ekuseni kwaqala ukunambitheka iphunga elimnandi okwephuza, okwakhuphuka umbuzo othi: kungani uhamba endaweni ethile yokubheka, kuphi ukuphuza ikhofi? Ukuze uthole ukudla kwasekuseni, nikeza ama-pancake, ama-omelets, okusanhlamvu. Njalo udle amaqebelengwane amnandi ayenziwe. Kwasemini, kumele banike isobho (kharcho, borsch), okwesibini, isiphuzo. Izingxenye zikhulu. Izitsha akuzona zokudlela. I-Carpaccio ne-saumon ayinikezi lapho, kodwa iziqiniseko zakho ziqinisekisiwe. Igumbi lokudlela lihlanzekile, lihle futhi lihanjiswe ngokushesha. Ngamanani okudla e-Anapa, ihhotela libiza kakhulu kunezinye izindawo.
Ngisho noma ngabe ukhokhele kuphela indawo yokuhlala, ungasebenzisa njalo i-kettle kagesi kanye ne-microwave, ezisekwamukela. Ngesicelo sakho, ungasebenzisa ibhodi le-iron and ironing mahhala. Wonke amakamelo ane-Wi-Fi esheshayo. Izivakashi ezincane njalo ngoLwesihlanu kusukela ku-8 kuya kwesigamu esedlule u-9 kukhona umcimbi wokuzijabulisa. Kodwa inkonzo enhle yehhotela ibizwa ngokuthi ukudluliselwa. Uzotholakala esikhumulweni sezindiza noma esiteshini sesitimela bese uhambisa ngqo endlini yesimenywa "Golden Mile" (Anapa). Izibuyekezo zithi amanani (ama-ruble angamakhulu amane namakhulu amahlanu namashumi ayisihlanu ngokulandelana) aphansi kunelabo abashayeli bamatekisi e-resort. Imibhangqwana eminingi ehamba nengane ibhalele ikamelo eliphindwe kabili. Ukuhlala esihlalweni sokuphoqa noma izindleko zefa kuleli cala kuphela ama-ruble amahlanu kuphela ngosuku. Futhi izingane ezineminyaka engaphansi kweminyaka emihlanu ubudala zijabulela isaphulelo sama-60% sokuphila.
Indlu yezindwendwe «i-Golden Milele» (Anapa): ukubuyekezwa kwezivakashi
Abagibeli bathande bonke abanye kuleli hotela elincane. Ibhande lebhedi liyashintshwa njalo ezinsukwini ezinhlanu. Abasebenzi banobungane kakhulu. Umpheki uyinkosi yangempela yomsebenzi wakhe. Izindlu zokuhlala yiyona eningi yentando yeningi. Ikamelo elibili ngoMeyi libiza ama-ruble angamakhulu ayisishiyagalolunye, ekuqaleni kukaJuni futhi ekupheleni kukaSepthemba liyinkulungwane eyodwa namakhulu amane. Esikhathini esiphezulu sonyaka, e-Anapa siwela kusukela ngoJulayi 15 kuya ku-Agasti 25, intengo ye-deluxe evamile ifika kuma-ruble angu-3200. Kodwa izivakashi eziningi zithi zizobuya futhi ngenjabulo.
Montenegro. "Villa Oliva" - indawo ekahle uphumule
Rizzi ex-Orange Fun Umhlaba Ihhotela - eduze ihhotela Kemer (Turkey)
Okuqukethwe kwezomnotho kwempahla
Tofu - umonakalo kanye nezinzuzo. Tofu: Ukwakheka
Usayizi L - silingana insikazi ngamasentimitha?
Yiliphi izwe - lapho kudabuka khona ibhola?
Umsuka igesi yemvelo, izinqolobane zayo bese ukukhiqiza. Igesi yemvelo Amasimu eRussia nakwamanye amazwe
Lishe laba ngumlotha Houses Belarus